Koorsada ArcGIS waxaa lagu dabaqay Sahaminta Dhulka - Geofumadas
Luulyo, 2012 Cartografia, Baridda CAD / GIS
Geedaha in kaynta waa shirkad la ah dalab tababar oo xiiso leh aagga geospatial ka kooban yahay ku takhasusay nidaamo kala duwan, xirfadlayaasha la aqoonsan yahay oo awood u gudbinta aqoonta habka waxbaridda waxtar leh oo aad rabto inaad la wadaagto waayo-aragnimada jaalkooda.
Waqtigan Geedaha dhirta wuxuu ku baaqayaa marxal cusub oo ka mid ah koorsada internetka ee ArcGIS oo lagu daboolay sahaminta macdanta. Tani waa koorso xiiso leh marka laga reebo barashada sida loo isticmaalo qalabka GIS, waxaa loola jeedaa mudnaanta maamulka maaraynta jiilaalka. Waxaa loo qorsheeyay laba heer:
Heerka 1. Waxaan bilaabayaa 10 ee Sebtembar 2012.
Mudada waa toddobaadka 8, oo leh wadarta saacadaha 50.
Koorsadani waxaa loogu talagalay dhammaan xirfadlayaasha doonaya inay maamulaan macluumaadkooda GIS ee jawiga ArcGIS. Inta lagu jiro toddobada kulan ee kooraska ka dhiga, waxaad baran doontaa inaad aragto oo aad ka baaraandegto xogta iyo inaad si fudud uga shaqeyso codsiga.
Dabcan waa muhiimad la taaban karo. The layliyada jeediyay maareeyo macluumaadka dhulka oo xiiso gaar ah u xirfadlayaasha ka shaqeeya wax soo saarka sahaminta macdanta iyo anigaa iska leh labada, laakiin waxaa lagu saleyn karaa beerta kasta oo kale oo ka mid ah waxqabadka.
Barnaamijka Heerka 1
Kulanka 1: Hordhaca GIS. Kiisaska isticmaalka GIS ee sahaminta macdanta. Talooyin ku saabsan kaydinta iyo magacaabista faylasha.
Kulanka 2: Deegaanka ArcGIS: ArcMap, ArcCatalog iyo ArcToolbox.
Kulanka 3: Codsiga calaamadaha dhibcaha, khadadka iyo garaannada.
4 fadhigeed: Hagaajinta khariidooyinka la tarjumay.
5 fadhiga: Nidaamyada isuduwidda. Fikradaha muhiimka ah iyo xirfadaha qaarkood si looga fogaado qaladaadka.
Kulanka 6: Editing of Polygons and Tables. Qaadashada lakabka qaybaha lithological ka soo xoqid.
7 fadhiga: Qaab-dhismeedka qaabka ee khariidada loogu talagalay qoraha ama daabacaadda guriga.
Sameynta tijaabo dhab ah.
Heerka 2. 12 wuxuu bilaabmaa 2012 November.
Mudada waa toddobaadka 10, oo leh wadarta saacadaha 70.
Dabcan waxaa loogu talagalay ee xirfadlayaasha ka shaqeeya wax soo saarka sahaminta macdanta iyo anigaa iska leh, Haseyeeshee, geochemists, geophysicists, injineerada macdanta, cartographers, geographers, sahmiyayaal, geomensores, kaaliyaha geologist ama wax shaqo kale oo xirfad leh macluumaadka dhulka. Waxay kaa caawin doona inaad u maareeyaan macluumaadka sahlan, si degdeg ah, hufan oo sax ah, fogaado khaladaadka caadiga ah ka dhaca tallaabooyinka kala duwan oo ku lug leh Isbadal xogta this galay aqoonta looga baahan yahay inay sameeyaan go'aamada.
Waa inaad leedahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan ArcGIS ama aad dhameysatay koorsada Heerka 1.
Barnaamijka Heerka 2
1 fadhiga: Isku-dubaridka iyo muujinta latology lakin a Roobka ee geophysics.
2 fadhiga: Ka shaqeynta sawirada dayax-gacmeedka.
Kulanka 3: Dhiirigelinta faylasha raajada.
Casharka 4: La shaqeynta juqraafiyada shay-baarka.
Kulanka 5: Hordhaca macluumaadka macluumaadka xiriirka. Waxaan la shaqeynayaa miisaska la xiriira.
Kulanka 6: Symbology ku habboon latologic iyo layers geochemical.
Kulanka 7: Gardarada iyo qaabaynta qaabaynta geodatabase
8 Kulanka: Digital Sare u qaadid lagu daydo (dem) oo aad dhan oo iyaga ka heli kartaa la geoprocessing (Falanqyeeyaha kordhin 3D).
9 Kulanka: • Galitaanka 3D, sal-dhigida in ArcScene, fallaadhaha 2D beddelidda, si ay 3D (Falanqyeeyaha 3D kordhin).
Macalinka koorsooyinka: Marta Benito, khabiir ku ah maamulka maareynta xogta juqraafiyeed. Ka dib markii la haysto jagada maamulaha GIS ee qaar ka mid ah shirkadaha macdanta ee adduunka, waxay hadda tahay lamaane wayn iyo la-taliye shirkadda Natural Resource GIS.
Macluumaad dheeraad ah: http://www.arbolesquehacenbosque.com/curso_sig.htm
Sidoo kale boostada info@arbolesquehacenbosque.com Macluumaad dheeraad ah ayaa laga codsan karaa sicirrada, habka iyo nooca aqoonsiga.
Intaa waxaa dheer in aanu ku talineyno in aan aragno khayraadka kale ee shabakadan, sida kiiska maktabadda, halkaas oo ay jiraan xiriirro lagu soo dejinayo dukumintiyada xaqiiqda ah.
Post Previous«Previous Maxaa ku dhacaya sanadaha 40?
Post Next Shaxda Caalamiga ah ee Cadaaladda WaalidkaNext »
4 Jawaab ah "Koorsada ArcGIS ee lagu dabaqay Muuqaalka Dhulka"
Lorena Pillajo isagu wuxuu leeyahay:
Marka koorsada cusub ee internetka bilaabanto
Wilfar T. Barraza isagu wuxuu leeyahay:
Waqti fiican !, ka salaanta Kolombiya, koorsadan: «ArcGIS Course lagu dabaqayo Baadhitaanka Macdanta» ayaa mar kale la sheegayaa?
Wilfa isagu wuxuu leeyahay:
martigelin isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2016 at
Waxaan codsanayaa casumaad rasmi ah oo aan u soo bandhigo shirkadda aan ka shaqeeyo, oo aan rasmiga u fasaxo ogolaansho iyo oggolaansho joogitaan ee koorsada.